COVID-19: Sida la iska Diiwaangaliyo baaritaanka Bilaash ka ah. - Mayor | seattle.gov
Halkan Iskaga Baar COVID-19
Magaalada Seattle waxay hadda bixinaysaa baaritaan COVID-19 oo bilaash ah, da 'kasta, oo dhan Seattle dhexdeeda iyadoo iskaashi lala sameynayo King County iyo UW Medicine. Baabuur iyo kusocod baaritaan ayaa la heli karaa, laakiin waa inaad marka hore iska diiwaangeliso khadka tooska ah ama taleefanka.
Haddii aad la kulantid astaamaha COVID-19, fadlan wac (206) 684-2489 si aad ballan uga qabsato baaritaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Khadadka taleefannadu waxay furan yihiin Isniinta illaa Jimcaha, 8:30 AM illaa 5:00 PM. Noo sheeg afkaaga Ingiriisiga si aad ula hadashid turjubaan.
Maxaad u baahan doontaa si aad u hesho Baaritaan lacag la’aan ah:
Aqoonsi sawir leh oo kutaalo taariikhda dhalashadaada. Baariisto waa la heli karaa iyadoon loo eegin Jinsiyaddaada ama sharcigaaga muhaajirnimo.
Kaarka caymiska, hadaad caymis leedahay. Uma baahnid inaad leedahay caymis ama warqad dhakhtar si aad ballan uga sameysato oo baaris laguu sameeyo. Wax lacag ah lagaa qaadi maayo imtixaanka.
Haddii aad la kulantay qof qaba COVID-19 laakiin aadan lahayn astaamo, weli waad heli kartaa baaritaan bilaash ah. Raac talaabooyinkan si aad isku baarto:
1. Balanso Baarista
Iska diiwaangeli khadka tooska ah (foomku wuxuu ku qoran yahay Ingiriisiga)
Dooro goobta baarista qaybaha hoose si aad u bilowdo hawsha diiwaangelinta.
Dooro waqtiga aad ballanta leedahay ka hor intaadan tagin. Ku buuxi macluumaadka caymiska haddii aad caymis leedahay. Waxaad ka heli doontaa emayl xaqiijin ama qoraal ka socda nidaamka jadwalka, Solv, kadib marka balaantaada la hubiyo.
Magaalada Seattle COVID-19 Goobaha Imtixaanka
(Bogagga ballanta waxay ku qoran yihiin Ingiriis.)
Booqo websaydyada Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County bogga ku-socodka iyo goobaha dheeraadka ah ee baaritaanka COVID-19 ee kuugu dhow: kingcounty.gov/covidtesting
Goobaha baaritaanka ee Rainier Beach iyo West Seattle waxaa loo beddelay goobo tallaal oo buuxa COVID-19. Haddii aad xaq u leedahay, ka mid noqo liiska ogeysiiska in lagaa tallaalo: seattle.gov/vaccine
Iska diiwaangeli dhinaca khadka taleefanka
Haddii aad uga baahan tahay caawimaad xagga diiwaangelinta, wac (206) 684-2489. Khadadka taleefanku waxay furan yihiinMarka hore ilaa Sabtida, 8:30 AM ilaa 5:00 PM.
Hadaad ubaahantahay caawimaad dhinca luqada ah, fadlan noogu sheeg Ingiriisiga kuuqada aad ubaahantahay, kadib waxaan kugula xiriiri karnaa turjubaan.
2. Booqo Meesha Baarista Lagu Sameeyo
Diiwaangelinta ka dib, waxaad awoodi doontaa inaad baabuur ku waddo ama aad lug ku aado goobta imtixaanka waqtiga loogu talagalay.
Howshu waxay qaadan doontaa 20 daqiiqo. Xidho wejigaaga wax daboolo markaad soo booqanaysid meesha baarista lagu sameeyo.
Kadib marka laguu sameeyo baarista, xusuusnow inaad keydiso koodh lagu siiyay goobta Baarista. Waa tan tusaalaha koodhka:
3. Hel Jawaabahaada
Waxad iskaan mari kartaa lambarka QR si aad uhesho natiijooyinkaaga si toos ah.
Sidoo kale Waxa aad booqan kartaa websaydhka UW Medicine (https://securelink.labmed.uw.edu) si aad natiijada ugaga raadiso adigoo isticmaalaya 16-ka lambar iyo taariikhda dhalashadaada bogooda.
Waxaan hadda la kulannaa wakhtiyo wareeg ah oo ka dheer sidii caadiga ahayd. Filo natiijooyinka 48-72 saacadood.
Warbixino Dheeraad ah oo la xiriira
Haddii adiga ama qof aad daryeeshid ay hayso xaalad caafimaad oo degdeg ah, wac 9-1-1.
Hadii aad qabtid su'aalo caafimaad oo la xiriira COVID-19, la xiriir bixiyahaaga caafimaadka ama xarunta wacitaanka ee degmada King County COVID-19 inta u dhaxaysa 8 AM illaa 7 PM PST saacadda kana wac (206) 477-3977.
Meelahan waxaa loogu talagalay dadka gawaarida ku socdo. Goobahan tijaabada ah waxaa loogu talagalay in lagu baaro dadka gawaarida wato. Goobahan ayaan loo adeegsan karin dadka leh arrimaha dhaqdhaqaaqa ama haddii aad isticmaasho kursi curyaan ah. Hadii aad ubaahantahay goob baaritaan ah oo fudud in la dhex, fadlan booqo websaydhka Caafimaadka Dadweynaha - Seattle iyo King County ama wac (206) 477-3977 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.